UCandice Patton uhamba ze kunye neMifanekiso eshushu kunye neMiboniso eshushu - Indawo Yolondolozo Lwembali Yomboniso
UCandice Patton uhamba ze kunye neMifanekiso eshushu kunye neMiboniso eshushu
Jonga umdlali we-ebony uCandice Patton imifanekiso enganxibanga kunye nemifanekiso engamanyala, apho abonisa khona iesile lakhe kunye nomzobo we-bikini. Kwakhona, songeze ukudityaniswa kwemiboniso eshushu uCandice ayenzileyo kulo lonke ixesha lakhe elingekude… Lixesha lokonwaba abantu!
UCandice Patton (oneminyaka engama-31) ngumdlali weqonga waseMelika. Waziwa kakhulu ngendima yakhe njengo-Iris West kumdlalo kamabonakude ‘ Ifleshi ‘Nendima yakhe ephindaphindayo kuthotho lwee-BET kumdlalo kamabonwakude 'Umdlalo'. Indima ikhokelele ukubonakala kweminye imiboniso ye-Arrowverse kubandakanya 'iTolo', 'iSupergirl' kunye 'neeNtsomi zangomso' zomnyhadala we-Crisis on Earth-X '. Kwisigaba sesithathu sexesha, wadlala uMillie Foss, intombi yemigulukudu. Kwi-2017, indima yakhe ye-Iris West yamzuzela imbasa yeSaturn yeQonga loMlingisi oNgcono kwiTV. UPatton wazalelwa eJackson, eMississippi, kodwa wakhulela eTexas. Uphumelele kwisikolo samabanga aphakamileyo iPlano East ngo-2003 kwaye kamva waya kwiYunivesithi yaseWestern Methodist eDallas ngo-2007.
UCandice Patton uhamba ze pics zabucala
Ekuqaleni, sinegalari evuzayo kaCandice Patton. Usibonise iiselfie zakhe zabucala ebhedini, phambi kwesipili naphambi kokubonakala kwekhaphethi ebomvu. UCandice Patton uthathe imifanekiso emininzi eshushu kwi-bikini, ke siyacinga ukuba uyazingca ngento ekufuneka esinike yona! Lo mfazi umnyama ungomnye nje we-celeb emgceni, onobuso obubi, kodwa ene-makeup, ujongeka elungile. Apha sinee-selfie ezininzi zobuso bendalo kaCandice Patton kunye nomzimba, ukuze sikwazi ukubona owona mfanekiso!
UCandice Patton upskirt
Emva koko siza kukunika iifoto zokungasebenzi kakuhle kweewadi zikaCandice Patton. Ubonise i-pussy, okanye kungcono ukuthi iipanty ngombala ohamba ze. UCandice wayephephezelisa ilokhwe ngomnatha omkhulu, kwaye neepanty zakhe zazibengezela. UPaparazzi uthathe iifoto kunye nesiphumo sentshukumo sezantsi. UPatton wayenxibe ilokhwe yegolide kwaye wayejongeka emangalisa!
UCandice Patton imifanekiso eshushu
UCandice Patton oshushu uza kuyenza le mini ibe yelanga, nokuba akukhange kube njalo! Le ebony isibonakalisile iesile lakhe elimile kakuhle kunye nee-boobs eziqinileyo kwiindawo ezinzulu zokuhlamba, i-bikinis, kunye ne-lingerie… Ngokwenene aba bahleli bemagazini bayawenza umsebenzi. Enkosi kubo kwaye 'imali ingathenga yonke into' isigwebo, sininzi I-celebs ehamba ze kwaye imizimba yabo eshushu ibhenciwe!
UCandice Patton ohlekisayo
Emva kwemifanekiso emininzi eshushu kaCandice Patton, simlungiselele ze kunye nezokwabelana ngesondo… Ezinye zazo zityhila nje ubuso bakhe ngexesha lesenzo sokwabelana ngesondo, kwaye ezinye zibonisa iesile likaCandice Patton, amabhulu, kunye nesisu ngelixa enxibe iimpahla zangaphantsi ezithandekayo kunye neetanki ezikhululekileyo. Umboniso wokuqala uvela 'kwiFlash', ke cinezela umdlalo kwaye wonwabele ukubukela lo mfazi umnyama kunye nehorny oza kwenza ubuze obuninzi kwixesha elizayo! Kwaye silindile!
I-lucy hale ifoto engenasiphelo yokuvuza
karen gillan unganxibanga iesile
laura san giacomo unganxibanga pic